Japanese Used Cars by Maker
Japanese Used Cars from JPCTRADE
ဂျပန်ပြည်တွင်းဈေးကွက် (JDM) မှ used car exporter company "JPCTRADE" Website မှကြိုဆိုပါ၏ ။ဂျပန်နိုင်ငံမှအရည်သွေးမှီသည့် used car များကို ကုမ္ပဏီ ရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ တင်ပို့ ပေးလျက်ရှိပြီး အချက်အချာကျသော Tokyo မြို့အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေး မှီသည့် ဂျပန်ဈေးကွက်မှ used car များကို လူကြီးမင်းတို့၏လိုအပ်မှူနှင့် အညီ ဂျပန်လေလံမှဝယ်ယူပေး ပြီး နှုန်းထား သက်သာသောအာမခံ ပေးမှု ၊လူကြီးမင်းမျှော်မှန်းထားသောငွေကြေးပမာဏနှင့်ကိုက်ညီစေသော ကားအမျိုးအစား များကို JPCTRADE မှ လူကြီးမင်းထံ အရောက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက အသုံးပြု လိုသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ကားတင်ပို့ရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် ဘယ်မောင်း၊ ညာမောင်းဧည့်အိမ်စီး ကားများ၊ ကုန်တင်ကားများ၊ဘတ်စ်ကားများကို လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေ ရရှိနိုင်ပါသည်။
လေလံကားများ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် များကို ပြည့်စုံ တိကျစွာ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ် ပေးထားသဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင် ပါသည်။ ကျွှန်တော်များ JPCTRADE ကုမ္ပဏီမှ လျှင်မြန်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များဖြင့် လေလံကားများကို ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းအရောက် ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Mr. U AUNG HEIN SOE
Mr. U AUNG HEIN SOE Dear Mr.Raul, Firstly, I would like to say thanks for your helping and kindn
Consultants in Japan
JPCTRADE.COM.MM - Myanmar ©2003-2018. All right reserved.